कोरोना विश्व अपडेट : यस्तो छ महामारीको पछिल्लो अवस्था, कहाँ कस्तो ? – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोना विश्व अपडेट : यस्तो छ महामारीको पछिल्लो अवस्था, कहाँ कस्तो ?
काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्वका लागि ठूलो चुनौति बनेको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वमा यो समाचार तयार पार्दासम्म ४ लाख ७४ हजार ४४४ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने ९१ लाख ९२ हजार ३०९ जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यस्तै ४९ लाख ३९ हजार २९५ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने विश्वमा ५७ हजार ९०५ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
विश्वका २१३ वटा देशहरुमा आफ्नो प्रकोप फैलाईसकेको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अमेरिकामा १ लाख २२ हजार ६१० जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने २३ लाख ८८ हजार १५३ जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यहाँ १० लाख २ हजार ९२९ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने १६ हजार ५१० जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै ब्राजिलमा अहिलेसम्म ११ लाख ११ हजार ३४८ जनालाई संक्रमण भएको छ भने ५१ हजार ४०७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
त्यस्तै ब्राजिलमा ५ लाख ९४ हजार १०४ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने ८ हजार ३१८ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै रुसमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिलेसम्म ८ हजार २०६ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने ५ लाख ९२ हजार २८० जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यहाँ ३ लाख ४४ हजार ४१६ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने २ हजार ३०० जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै स्पेनमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण २८ हजार ३२४ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने २ लाख ९३ हजार ५८४ जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यस्तै बेलायतमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिलेसम्म ४२ हजार ६४७ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने ३ लाख ५ हजार २८९ जनालाई संक्रमण भएको छ । त्यहाँ ३३० जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै इटालीमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिलेसम्म ३४ हजार ६५७ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने २ लाख ३८ हजार ७२० जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यहाँ १ लाख ८३ हजार ४२६ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने १२७ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै फ्रान्समा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिलेसम्म २९ हजार ६६३ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने १ लाख ६० हजार ७५० जनालाई संक्रमण भएको छ । त्यहाँ ७४ हजार ६१२ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने ७०१ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै जर्मनीमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिलेसम्म ८ हजार ९६९ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ लाख ९२ हजार ११९ जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यहाँ १ लाख ७५ हजार ३०० जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने ३४९ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै भारतमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिलेसम्म १४ हजार १५ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने ४ लाख ४० हजार ४५० जनालाई संक्रमण भएको छ ।
भारतमा २ लाख ४८ हजार १३७ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने ८ हजार ९४४ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै वर्ल्डोमिटरले जनाए अनुसार टर्कीमा कोरोना भाइरसको महामारीबाट ४ हजार ९७४ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने १ लाख ८८ हजार ८९७ जनालाई संक्रमण भएको छ । त्यस्तै त्यहाँ १ लाख ६१ हजार ५३३ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने ८४६ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै पेरुमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिलेसम्म ८ हजार २२३ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने २ लाख ५७ हजार ४४७ जनालाई संक्रमण भएको छ । त्यहाँ १ लाख ४५ हजार ३२० जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने १ हजार १४४ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै ईरानमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिलेसम्म ९ हजार ७४२ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने २ लाख ७ हजार ५२५ जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यहाँ १ लाख ६६ हजार ४२७ जना स्वस्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने २ हजार ८९८ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै क्यानडामा ८ हजार ४३६ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने १ लाख १ हजार ६३७ जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यहाँ ६४ हजार ३३४ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने २ हजार ४८ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै मेक्सिकोमा कोरोना भाइरसको महामारीका काराण अहिलेसम्म २२ हजार ५८४ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने १ लाख ८५ हजार १२२ जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यहाँ पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै ७५९ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने ४ हजार ५७७ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
मेक्सिकोमा १ लाख ४० हजार ११८ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने ३७८ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै चीनमा आज थप २२ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । चीनमा अहिलेसम्म ४ हजार ६३४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८३ हजार ४१८ जनालाई संक्रमण भएको छ । त्यहाँ ७८ हजार ४२५ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन भने ११ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै पाकिस्तानमा अहिलेसम्म ३ हजार ६९५ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने १ लाख ८५ हजार ३४ जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यहाँ ७३ हजार ४७१ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने ३ हजार २३६ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ ३ हजार ९४६ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने १०५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
त्यस्तै बेल्जियममा अहिलेसम्म ९ हजार ६९६ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने ६० हजार ५५० जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यहाँ १६ हजार ७७१ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने ५० जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै नेदरल्याण्ड्समा अहिलेसम्म ६ हजार ९० जनाको मृत्यु भएको छ भने ४९ हजार ६५८ जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यहाँ ५५ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै स्विडेनमा ५ हजार १२२ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने ५८ हजार ९३२जनालाई संक्रमण भएको छ । त्यहाँ २०० जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
बितेको २४ घण्टामा ९६० जनाको कोरोनाको कारण ज्यान गएको छ भने ११ हजार ४३४ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।